ShweMinThar: How to get Flat Tummy After A C-Section?
ဒီမေးခွန်းကိုကျန်းမာရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ ဝမ်းဗိုက်အဆီချချင်သူမိခင်တွေတော်တော်များများမေးထားတဲ့အတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ချစ်စွာသောရင်သွေးကိုဖွားမြင်ပြီးချိန်မှာ မိခင်တိုင်းကိုစိတ်ပျက်စေတာတာကတော့ ချက်အောက်ပိုင်း ဝမ်းဗိုက်နှင့်ခါးပတ်လည်ကအဆီအစုအဝေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအိမ်ထောင်သည်များအတွက် မီးဖွားပြီးတဲ့အိမ်ရှင်မ အဆီပိုဗိုက်ပူနေတာဟာ သာမာန်အခြေအနေဖြစ်ပေမယ့် အချို့သောအိမ်ထောင်ရှင်မများအတွက်တော့ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအိမ်မက်ဆိုးတခုပါဘဲ။ C-Section သို့မဟုတ် caesarean လိုခေါ်တဲ့ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခြင်းကို အကြီးစားခွဲစိတ်မူ့အဖြစ်ဆေးပညာလောကမှာခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ တချို့မိခင်များမှာချူပ်ရိုးအကျက်မြန်ပြီး၊ အချို့မှာချူပ်ရိုးကျက်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအပြင်ချူပ်ရိုးကျက်ဖို့ ရက်သတ္တပါတ် ၆ ပါတ် (၁လခွဲ) ကြာမြင့်ပါတယ်လို့စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များကအခိုင်အမာဆိုထားကြပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တလခွဲနောက်ပိုင်းမှာ ဝမ်းဗိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အန္တာရယ်ကင်းစွာစတင်လုပ်လို့ရပြီလား?
အတွင်းအပြင်ချူပ်ရိုး ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကျက်ဖို့ ၁လခွဲအချိန်လိုအပ်ပေမယ့်၊ မွေးဖွားပြီး ၃ လအတွင်းမှာတော့ အလေးများနှင့်အတူအားသွန်ခွန်စိုက်ပြုလုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးအလောတလျှင်မပြုလုပ်သင့်သေးပါဘူး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့တင်ပါဆုံးကြွက်သားတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအရှေ့ပိုင်းဝမ်းဗိုက်ရဲ့တင်းမာဆွဲအားကြောင့် ညောင်းညာ၊ အားပျော့နေမှာမလွဲမသွေပါဘဲ။ Listern to your body လိုခေါ်တဲ့ ခန္တာကိုယ်ရဲ့တုန်ပြန်မူ့ကိုစမ်းစစ်ပြီး အပေါ့စား တင်ပါးဆုံကြွက်သား(Pelvic Floor) လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဖြင့်စတင်လေ့ကျင့်ယူသင့်ပါတယ်။
Pelvic Floor လို့ခေါ်တဲ့ တင်ပဆုံကြွက်သားညစ်ယူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာ တင်ပဆုံကြွက်သားတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ညစ်ယူလေ့ကျင့်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်ပြောပြရရင်ဖြင့် ဆီးသွားနေချိန် တဝက်တပျက်ရပ်တန့်အောင်ကြွက်သားညစ်ယူလိုက်ခြင်းမျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) တင်ပဆုံသားနှင့်အတူ ချက်အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ ကျုံ့ဝင်နိုင်သမျှကျုံဝင်နိုင်အောင်ညစ်ယူလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ၁၀ စက္ကန့်ညစ်ယူထားပါ။ (မှတ်ချက်။ အသက်အောင့်မထားရပါ)
(ဂ) ထိုင်နေချိန်၊ ကလေးချီမရင်ပွေ့ယူချိန်မျိုးမှာ ဂရုတစိုက်သတိထားပြီး တင်ပဆုံသားနှင့်အတူ ချက်အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ ကျုံ့ဝင်နိုင်သမျှကျုံဝင်နိုင်အောင်ညစ်ယူလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် မီးယပ်သွေးဆုံးလွန်ချိန်များမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ဆီးထွက်ကျခြင်းမျိုးနည်းပါးစေပါတယ်။ အပိုဆုအနေနဲ့ သားမွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားများရဲ့ညစ်ယူနိုင်စွမ်းပါတိုးတက်၊ သန်မာလာစေပြီး သင့်အမျိုးသားရဲ့ စွဲမက်တဲ့ချစ်ခြင်းကိုပါပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ (မှတ်ချက်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ OG တွေကမိခင်လောင်းတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်ထဲက စတင်လေ့ကျင့်စေပါတယ်)
အထက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းကို မနက်ပိုင်း ၁၀ စက္ကန့် တင်ပဆုံကြွက်သားညစ်ခြင်း ၅ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ်၊ ညပိုင်း၁၀ စက္ကန့် တင်ပဆုံကြွက်သားညစ်ခြင်း ၅ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ပျမ်းမျှခြင်းရက်သတ္တပါတ် ၄ ပါတ်အတွင်းမှာ ချုပ်ရိုးပါတ်ဝန်းကျင် အထူးသဖြင့်ချုပ်ရိုးအစွန်း ၂ ဖက်မှနာကျင်မူ့လုံးဝမခံစားရဘူးဆိုရင်တော့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မှတ်ယူပါ။ ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ခွဲစိတ်ပြီး ၄လကြာမြင့်ပြီးချိန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောမိခင်များမှာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အချိန်အနည်းအငယ်ပိုမိုကြာမြင့်တတ်ပြီး အကြာဆုံးအချိန်ဟာ ၆ လထက်မပိုပါဘူး။ (မှတ်ချက်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မူ့ကိုစမ်းစစ်ပါ)
Pelvic Floor တင်ပဆုံကြွက်သား, Kegel လို့ခေါ်တဲ့မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရုံနဲ့တော့ချက်အောက်ပိုင်းအဆီအစုအဝေးကို လျော့ပါးသွားအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ကာယဗလနည်းစနစ်အရ လေ့ကျင့်ခန်း ၃၀%, အစားအဟာရ ၇၀% ဆိုတဲ့နိယာမက ယနေ့အထိမှန်နေတုန်းပါဘဲ။ နို့တိုက်ခြင်းကြောင့် အဆီကျဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်၊ နို့တိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဲ ဆာလောင်မူ့ပိုမိုဖြစ်စေကာ၊ လိုအပ်တာထက်ပိုမိုစားသုံးမိတတ်ခြင်းက ဝမ်းဗိုက်အဆီတိုးပွားစေတဲ့အဓိကတရားခံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာရှေးရိုးရာအယူအဆအရ စားနိုင်မှနို့ထွက်များမယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝမှန်ကန်တဲ့အယူအဆမဟုတ်ဘူးလို့ စာရေးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရငြင်းဆိုချင်ပါတယ်။ မျက်မှောက်လောကမှာ အဟာရလုံလောက်စွာမစားသုံးနိုင်တဲ့မိခင်တွေမှာ တစက်စက်ယိုကျနေတဲ့နို့ရည်သက်တာမျိုးမြင့်တွေ့ဖူးပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးဥပမာပေးရရင် တချိန်ကချို့တဲ့ငတ်မွတ်ခဲ့တဲ့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာ အဟာရဖြည့်နို့မှုန့်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားပေမယ့် မိခင်တွေရဲ့ သဘာဝနို့ရည်နဲ့ဘဲ ကလေးငယ်တွေအသက်ဆက်၊ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျစ်လစ်ချပ်ရပ်တင်းမာပြီး ပုံကျတဲ့ဗိုက်သားရရှိဖို့အတွက် ဒေါက်တာထွန်းထွန်းရဲ့ ပို့စ်အားကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးရဲ့ အဆီရာခိုင်နှုံးနည်းဘို့
၂။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ တောင့်တင်းသန်မာဘို့ အချက် ၂ ခုပေါ်မူတည်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ခန္ဓာအဆီကျဘို့က စားတဲ့ ကယ်လိုရီ ကိုလျော့ချပြီး လေ့ကျင့်ခန်း workout လုပ် တဲ့ကယ်လိုရီကပိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ workout လုပ်ရာမှာ cardio, whole body workout, high intensity interval training အစ ရှိတာတို့ အချိုးညီညီလုပ်ပေးဘို့လိုပါတယ်။ စားတာထက် workout လုပ်တာက ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီ ပိုလုပ်နိုင်ရင် အဆီ ၁ ပေါင်ကျပါမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် တပတ်ကို အဆီ ၁ ပေါင် မှ ၂ ပေါင်ထိချ နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တပတ်ကို ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက် ၃၅၀၀ ထိ နည်းဘို့ တရက်ကို ၅၀၀ လောက်ပိုပြီးလောင်ကျွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်လိုရီ ၃၅၀၀ လောက်ဘဲလောင်ကျွမ်းဘို့ ကို cardio တခုတည်းပြေးမယ်ဆို တနာရီ ၅ မိုင်နှုံးနဲ့ တနေ့ကို တနာရီ ၆ ရက်လောက်ပြေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းသန်မာဘို့ ကတော့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမေရိကန် council of exercise ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းများအနက် crunch on ball, bicycle crunch, vertical leg crunch တို့ ဟာ အကောင်းဆုံး ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်း များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ၃ ခု rectus abdominis, external oblique, internal oblique ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု direction အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ တနေ့ကို ၃ မျိုး တမျိုးကို ၁၂ ကြိမ်က ၁၅ ကြိမ် ၂ ကျော့ မှ ၃ ကျော့ ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ရက်ခြားလုပ်ပြီး တပတ်ကို ၂ ရက် မှ ၃ ရက်သာ လုပ်သင့်တယ်လို့ council of exercise ရဲ့ထုတ်ပြန် ချက်မှာပါ ပါတယ်။ နေ့စဉ် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြွက်သားတွေ လောင်ကျွမ်းတာ ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ နာမည်ကြီးအချို့ abs လေ့ကျင့်ခန်းတွေနေ့တိုင်းလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ထူးခြားတဲ့ ခန္ဓာဗေဒ တည်ဆောက်မှုရှိသူတွေမို့ ချွင်းချက်ထားလိုက်ပါ။
လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါသည်။
၁၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၆ (SGT 12:13)
Credit: ကာယဗလနှင့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ Group